DAAWO: Rani Mukerji Oo Adduunka La Wadaagtay Sawirkii Ugu Horreeyey Ee Gabadheeda Adira & Farriin La Socotay - Hablaha Media Network
DAAWO: Rani Mukerji Oo Adduunka La Wadaagtay Sawirkii Ugu Horreeyey Ee Gabadheeda Adira & Farriin La Socotay
HMN:- Taageereyaasha Rani Mukerji ayaa muddo dheer sugayey inay arkaan sawirka gabadheeda ay u dhashay filimsameeye Aditya Chopra, gabadhaas oo lagu magacaabo Adira. 38 sanno jirtaan Rani Mukerji ayaana markii ugu horreysay sawirka gabadheeda waxay soo gelisay baraha bulshada.
Rani Mukerji ayaa sawirkaan kusoo beegtay sannad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii ay dhalatay gabadheeda Adira, waana markii ugu horreysay ee ay saxaafaddu aragto muuqaalka gabadhaanm iyadoo ay xusid mudan tahay inay Rani dhowr jeer hore ugu diiday saxaafadda inay sawirro ka qaadaan gabadheeda.
Adira ayaa maanta HAL SANNO jirsatay, waxayna kusoo beegantay maalin ku weyn aabaheed Aditya Chopra isla markaana tiyaatarrada la saaray filimka uu iska leeyahay ee Befikre, sidaas darteed warqaddaas ay soo qortay Rani ayaa waxaa lasoo dhigay akoonka rasmiga ah ee ay Twitter ku leedahay shirkadda Yash Raj Films, waxaana la socday sawirka Rani oo muujineysa sida ay u jeceshahay gabadheeda.
Rani waxay sharraxaad ka bixisay sida ay Adira u bedeshay nolosheeda, ugana dhigtay shaqsi wanaagsan iyo sida ay dooneyso inay gabadheedu ugu korto nolol xornimo leh, sida ay dooneyso hooyo kasta oo ku nool adduunkaan.
Rani iyo Adi markasta waa ay ilaalin jireen gabadhooda waxayna u diidi jireen saxaafadda inay sawirro ka qaadaan, laakiin ugu dambeyn adduunka ayey la wadaageen sawirkeeda, maadaama ay garteen inay tahay waqtiga ku habboon ee ay usoo bandhigi lahaayeen muuqaalkeeda.